Prism ကိုအသံ Maselec မာစတာစီးရီး Rebranding ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Prism ကိုအသံ Maselec မာစတာစီးရီး Rebranding ကြေညာ
Prism ကိုအသံ Maselec မာစတာစီးရီး Rebranding ကြေညာ
နိုင်ငံတကာကကျော်ကြားတဲ့ထုတ်လုပ်သူ Prism ကိုအသံယနေ့ (မတ်လ 31st 2016) မှကမရှိတော့သည်၎င်း၏ Maselec မာစတာစီးရီးထုတ်ကုန်အမည်ရ MEA-2, MLA-2 နှင့် MMA မှ-4XR စျေးကွက်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
Mases အီလက်ထရောနစ်လီမိတက်ကဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သောအဆိုပါ MEA-2, MLA-2 နှင့် MMA မှ-4XR ထုတ်ကုန်, အနာဂတျမှာ Mases အီလက်ထရောနစ်လီမိတက် (ထံမှ Maselec အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖွစျလိမျ့မညျwww.maselec.com).
Prism ကိုအသံ branded စတော့ရှယ်ယာကျန်ရှိသော၏တစ်ဦးကကန့်သတ်အရေအတွက်, အသစ်နှင့်အသုံးပြုရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိတှေ့ [အီးမေးလျ protected] အသေးစိတျအဘို့။
Prism ကိုအသံနဲ့ Maselec Prism ကိုမီဒီယာကုန်ပစ္စည်းများ Inc ကိုအမေရိကန်, ကနေဒါ, မက္ကဆီကိုနှင့်တောင်အမေရိကများအတွက်ပြည့်စုံ Maselec ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးများအတွက်သီးသန့်ဖြန့်ချိလိမ့်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
Prism ကိုအသံနဲ့ Maselec အလွန်အမင်းဖြည့်စွတ်အမှတ်တံဆိပ်ရှိနေဆဲနဲ့ Master နှင့်အခြားမှတ်တမ်းတင်အဆောက်အဦများအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖြေရှင်းချက်များကိုနိုင်ငံတကာတွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက် Maselec ထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. Prism ကိုအသံနဲ့ Maselec အကြားဆွေးနွေးမှုများတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်ပါအတိုင်း။
1995 ခုနှစ်တွင် Prism ကိုအသံနဲ့ Mases အီလက်ထရောနစ်နှစ်ဦးစလုံးအမှတ်တံဆိပ်ကျယ်ကျယ် 1993 အတွက်လန်ဒန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောထို့နောက်သစ်ကို Metropolis Master စတူဒီယိုမှာချထားခဲ့ကြပြီးနောက် Maselec ထုတ်ကုန်စျေးကွက်တစ်ခုမိတ်ဖက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာမီတွင်သောနောက်, Prism ကိုအသံဟာသူ့ရဲ့ "Maselec မာစတာစီးရီး" ထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးနှင့်အနောက်ပိုင်းတွင် MLA-2 နှင့် MMA မှ-2XR အကွာအဝေးမှဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်အဖြစ် MEA-4 မိတ်ဆက်ပေးသည်။
"Maselec နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့သော MPL-1 အကြိမ်ရေအထိခိုက်မခံ Limited ကဲ့သို့သောအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူဖောက်သည်ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခဲ့သည်ရသော၎င်း၏မဟာ consoles စမိတ်ဆက်," ဂရေဟမ် Boswell အရောင်းနှင့်စျေးကွက်၏ Prism ကိုအသံရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါ Maselec အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် Mases အီလက်ထရောနစ် Limited မှမရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးမကြာသေးမီနှစ်များတွင်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီးဒါဟာတပြင်လုံးကိုအကွာအဝေးအတူတူစျေးကွက်သင့်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ထက် Prism ကိုအသံနဲ့ Maselec အကြားအပိုင်းပိုင်းခွဲခံရ။ "
အဆိုပါ MEA-2, MLA-2 နှင့် MMA မှ-4XR နှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအနာဂတျမှာ၎င်းတို့၏ web site ကိုမှတဆငျ့ Mases အီလက်ထရောနစ်လီမိတက်မှညွှန်ကြားရပါမည် www.maselec.com
1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Prism ကိုအသံကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဂီတနှင့်ဂီတ, ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုနှင့် Multi-မီဒီယာစျေးကွက်များအတွက်အသံကထုတ်လုပ်မှုနဲ့ audio ပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးပြုသောအထူးပြုတိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခုအကွာအဝေးများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂျစ်တယ်အသံဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်, စနစ်ကအဆောက်အဦးများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကအဓိကစတူဒီယိုအဆောက်အဦမှ desktop သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းမှတ်တမ်းတင် & ထုတ်လုပ်မှုကနေ application များဖုံးအုပ်အသံ interfaces တစ်အကွာအဝေးလည်းပါဝင်သည်; Prism ကိုအသံကိုလည်းအဓိကအမျိုးသားရေးထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီအဖြစ်ထုတ်လွှင့်အဖြစ်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်အိမ်များအများအပြားနှင့်ဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတအသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုတဲ့ SADIE အသံထုတ်လုပ်မှုကို Workstation ဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Prism ကိုအသံတိုင်းတာခြင်းကိရိယာတန်ဆာပလာအသံအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် electroacoustic devices တွေကိုဖြစ်စေ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်နှင့်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်, နားကြပ်နဲ့နားကြပ်အဖြစ်အဓိကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ၌တည်နေသည်။
Mark Mark White က LSBU ရှိဆင်စတူဒီယိုများကို Maris သို့ပြောင်းရွှေ့ရာတွင်ယာယီအိမ်သစ်သို့ကူညီသည် - အောက်တိုဘာလ 11, 2019
PMC AES နယူးယောက် 2019 မှာ immersive အသံတွင်အဆိုပါ Spotlight ကိုထွန်းလင်း - အောက်တိုဘာလ 3, 2019
LSS Productions Sondheim ရဲ့ဆုချီးမြှင့်ဂျော့ဂ်ျနှင့်အတူ Park မှာဂီတနင်္ဂနွေနေ့အနိုင်ရရှိမှုသည် DPA ရဲ့အသေးဆုံးနားကြပ်မိုက်ခရိုဖုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ - အောက်တိုဘာလ 3, 2019
Maselec Rebranding Prism ကိုအသံ တီဗီနည်းပညာ	2016-03-31
ယခင်: ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့နှစ်ဦး Eaglets ၏တိုက်ရိုက်လွှကြီးမားသောပရိတ်သတ်ကိုဆွဲသား
နောက်တစ်ခု: GRC Ltd နှင့်ကွန်ယက်တီထွင်လုံခြုံကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ် Global Xpress လုပ်ငန်းဖောက်သည်။